China pcb uyilo abavelisi kunye factory, ababoneleli iikowuti | Ipandawill
Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza ukuba sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi lilonke Kubeko lwePcb, IBhodi yeeSekethe ezi-1, Pcb Ukubumba, Pcb Ukubumba Kwaye AssemblySiyabamkela ngokufudumeleyo abathengi, imibutho yamashishini kunye nabahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi kwaye bafune intsebenziswano ngezibonelelo ezifanayo. We baxhomekeke ngamandla zobugcisa eyomeleleyo ngokuqhubekayo ukudala ubugcisa ephucukileyo ukuhlangabezana nemfuno Ubeko Pcb, iimveliso zethu ngokubanzi ingqalelo kwaye bathembela abasebenzisi kwaye ukuhlangabezana ngokuqhubekayo ekuphuhliseni iimfuno zoqoqosho nezentlalo. Siyabamkela abathengi abatsha nabadala abasuka kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane kwezoshishino kwikamva kunye nokufezekisa impumelelo efanayo!
Umaleko onqabileyo we-Flex PCB
Le yibhodi yesekethe engqingqwa e-rigid-flex yesixhobo seOptics. I-PCB engqongqo eguquguqukayo isetyenziswa kakhulu kubuchwephesha bezonyango, ii-sensors, i-mechatronics okanye izixhobo, i-elektroniki icofa ubukrelekrele ngakumbi kwiindawo ezinamathuba amancinci, kunye nokuxinana kokupakisha kuyanda ukurekhoda amanqanaba kwakhona kwaye
Uyilo lwe-Eagle Pcb, Pcb & Pcba yoMvelisi, Umakhi weNcana Laminate Pcb, Isola Fr406 Pcb yoMvelisi, IBhodi yeSekethe enzima yeCopper, Isikhokelo soBeko lwePcb, Ukuveliswa kwePcb, 12 Umaleki Pcb yoMvelisi,